Indlela yokuqala ukuhlala kunye
Abantu abahlala bodwa bahlala behlupheka kwaye baxhwabile. Kwiphupha labo bapenda imifanekiso engafanelekiyo, indlela abahlala ngayo kunye nabathandekayo babo ngokuvisisana ngokupheleleyo, uxoxwa kunye nokufudumala. Ukubonakala komlingani akuqinisekisi ukuba iimfuno zabo ziya kuzaliseka ngokukhawuleza. Ukuba amaqabane asebenzi ngokwawo, ngoko kwixesha elizayo kuya kubakho ukuphazamiseka, kwaye ekugqibeleni baya kubandezeleka. Indlela yokuqala ukuhlala kunye, sifunda kweli nqaku.
Umsebenzi ohlala rhoqo, ukuvisisana kwangaphakathi, ukusebenza ngokuphelela kufuneka ube ngumgaqo wobomi kuwo wonke umntu. Ababini abaqonda umtshato njengento yokudala kunye nokusebenza kunye ngendlela efanelekileyo baya kuphumelela kunezo zibini, ngenxa yokuba banesizungu, baye bajoyina iinjongo zabo.
Abambalwa bethu bayazi ukuba abathandi bayashintsha i-biochemistry yomzimba wabo. Uthando luzalisa umphefumlo kwaye luguqula ubuntu bomntu, luwuzalise ngegesi, kwaye emva koko indoda ethandwayo iyaqala ukubona iifesi eziglasi. Uthando lubangalisa abantu abaninzi, izibini zicinga ukuba ziya kuba kunye. Kodwa le gesi egculisayo igxuma kwaye ekugqibeleni idlula ingqiqo, kwaye ukuvakalelwa komlingo kuyaphela. Elinye isibini kwisigidi singagcina isimo esingavamile sokuvisisana nothando.
Kwenzeka ukuba izibini eziphantsi kwefuthe le mvakalelo zaqala ukuhlala kunye, kodwa kungekudala okanye kamva ziyavuka kwaye abayi kukwazi ukuzana. Abalingani baya kufumana ukuba batyunyiwe, baxiliswe baze bakhohliswa, ngoko abazange babone ubuso bobuqiniso xa bejongene nenyaniso. Kwaye olu luhlobo lwezobudlelwane kwezobudlelwane, njengolulawulo, alukwazi ukulandelwa. Kukho ukucaphukisa, ukunganeliseki, kwaye oku kubangela ngakumbi imeko. Abalingani babone utshintsho kwimigangatho yabo, kwaye abaziveki nto ngaphakathi kwabo. Ukugcina ubudlelwane kufuneka uhloniphe iimvakalelo zakho.
Kukho iimfihlelo malunga nendlela yokugcina ubuhlobo obuhle kwiibini. Musa ukucima iqabane lakho kunye nelungelo lakho lokucinga. Kodwa oku akudingeki ukuba uthinteke kakhulu, kuba iingcamango zakho malunga neqabane lakho kufuneka zihambelane nenyaniso. Khawucinge ngekamva lakho kunye nomlingani, indlela oza kuhlala ngayo kunye, kunye kunye nokuxazulula iingxaki zentsapho, indlela oza kukhulisa ngayo abantwana. Kungcono uvumelane nayo yonke into ngaphambili, kufuneka ufunde kakuhle isiqingatha sakho, yiziphi iimvo zakhe kwihlabathi. Ukuphulaphula izimvo zakhe nezihlobo zakhe.
Xa kukho inkquzulwano kunye neengxabano, zama ukuphinda umtshilo othetha ngayo ngawe, ngaphambi kokuba eli xesha lifake ibinzana elithi "ukuba ndiyiqonda kakuhle". Mhlawumbi wena, ongaqondanga kakuhle okanye, into engazange uyive. Yona mpazamo enkulu xa, kwiingxabano, amaqabane, engazange aphulaphule ukuphela, qalisa ukuphonsa elinye icala kwaye uqale ukuqalekisa. Musa ukukhawuleza ukuphendula ukunyelisa kunye nokumangalelwa, kufuneka ube ngumfazi onobuqili kunye nolumkileyo. Musa ukubuhlungu xa kukho ubunzima ebuhlotsheni bakho, kuba zonke ezi zizwe zisesigxina. Kwaye emva kobudlelwane bakho nomntu othandekayo, uthando kunye nokuqonda ngokufanayo kuya kubuya.
Ihlabathi lethu likolo, ngoko ke kuyimfuneko ukuzama, ukuyeka ukufikelela kwiziphumo kwaye rhoqo ukuphucula. Ukuba uba, uhlale ufunda, kwaye uya kwenza oku kubomi bakho, ngoko uza kufunda into entsha, kwaye oku kuya kunceda ekuxazululeni iingxaki ezininzi. Umntu akafezekanga, kodwa uhlala ekulwela, kwimeko enjalo
Siyazi indlela onokuqala ngayo ukuhlala nomhlobo wakho. Awudingi ukufuna ukugqibelela kumlingane, kuba ungumntu onjengawe, kwaye unelungelo lokwenza iimpazamo. Uya kukwazi ukusigxila kwisiqingatha sakho ekufezekeni.
Ingxaki yokuxhomekeka kwothando
Ungaziqonda njani ukuba lixesha lokungena kunye nomfana?
Yintoni engayonakalisa intsapho efanelekileyo?
Umtshato womtshato: okulungileyo okanye okubi
Indlela yokugcina ulwalamano lokuhlukana?
Yintoni okufanele ibe yintando yomzali?
Indlela yokufunda kwakhona umntu ohlala ekhwele?
Indlela yokwelula izicathulo ezintsha?
UDmitry Nagiyev ubonakale kwisithombe "sokulinganisa" ngeempawu
Indlela yokunciphisa uxinzelelo lwangaphakathi, phumula
Iinqwelo eziphezulu ze-4 ze ntombazana "ezivela kwiphepha": yenza umfanekiso wakho uphawuleze!
Indlela yokuphilisa umkhuhlane okanye i-ARI kumntwana?
URosa Syabitova uthetha ngeengxaki kwiintsapho zentombi yakhe
Ephakathi kwezindlu: IJapan
Indlela yokukhetha izimonyo
Ukuhlanjululwa kwothando kunye nomtshato: iindlela ezili-8 ezivela kumlumbi ozuzayo
Ngaphansi kweyiphi imimiselo ubumba?
Jelly kwi-currant ebomvu
Ukutya, amamenyu amaxesha ahlukeneyo okukhulelwa
IiNzuzo kunye neeHlum zeZityalo zonyango